စီအိုင်အေ ပစ်ပစ် May 25, 2012 at 12:38 AM
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) May 25, 2012 at 12:53 AM
မြို့သူ အလယ်သမားတွေတော့ မတက်လာဘူး ထင်ပါ့။း)
တတ်နိုင်ရင် မီးပုံးပျံတွေမှာ မြို့လုံးပြည့် လွတ်တင်ပေးရမှာ။
ချစ်စံအိမ် May 25, 2012 at 2:15 AM
မြန်မာပြည် မီးရပါစေ အင်တာနက် ရပါစေ..
လို့ ဘယ်မှာဆုတောင်းရမလဲ တိန်...
အိမ်မက်စေရာ May 25, 2012 at 2:17 AM
ဓာတ်ဆီ၊ဒီဇယ်ဖိုး မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။း)
ဟုတ်တယ်သမီးစံရေ...ဖုန်းဆက်တိုင်းလဲ အိမ်က ဒါပဲ ပြောတယ်..မွဲတော့မယ်တဲ့..
မြတ်ကြည် May 25, 2012 at 2:45 AM
ပုံတွေကြည့်သွားတယ်။ တခါမှ မကြုံဖူးလို့ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာတော့ အမှန်ပဲ။ လျှပ်စစ်မီးလဲ လာဦးမှ။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် May 25, 2012 at 9:34 AM
အင်း မီး မီး မီး ဘယ်တော့များမှ ပြန်လာမှာလဲကွယ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) May 25, 2012 at 11:41 AM
ငါ့ညီမ ရေးထားတဲ့ပုံစံလေး သဘောကျတယ်...
ခရစ္စတလ် May 25, 2012 at 12:37 PM
ဖယောင်းတိုင် performance ဆိုတာ သမီးစံက စခဲ့တာပါး)))
မြသွေးနီ May 25, 2012 at 3:03 PM
အစ်မတစ်သက် ဒီလိုဆန္ဒပြပွဲ ဒီတစ်ခါသာကြုံဘူးတယ်...
ပုံလေးတွေမြင်ရတော့ သမီးစံရဲ့ အားထုတ်မှုအတွက် ကျေနပ်စရာ..
ရင်ဆူး May 25, 2012 at 6:18 PM
တမီးစံရေ....ပုံတွေရော ဗီဒီယိုတွေရော အကုန်ကြည့်သွားတယ်.....နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်ကြပါစေဗျာ....
စံပယ်ချို May 25, 2012 at 11:45 PM
အောင်အောင် May 26, 2012 at 6:44 AM
တမှီးချန် နီနာ့ကိုများ ဘကြီးအောင်တဲ့...CNNတမှီးချန် ဖယောင်းတိုင် ရောင်းတဲ့သူတွေတော့ ချမ်းသာလောက်ပြီနော်...ပုံတွေ အစအဆုံးကြည့်သွားပါကြောင်း
ကြည်ဖြူခင်ခင် May 26, 2012 at 11:41 PM
ပထမဆုံးပုံလေးကတော့ တကယ်အထိဆုံးပဲ.. သမီးစံရေ..း)
san htun May 27, 2012 at 12:58 AM
SAMMY May 27, 2012 at 2:16 AM
dear, i got only for this month. are you busy?
SAMMY May 27, 2012 at 2:17 AM
dear, i got only one for this month. are you busy?
Anonymous May 27, 2012 at 2:40 AM
Pls speed up. I can't certified with only one inamonth. Are you busy or not well?
phung bella June 21, 2012 at 9:16 PM